Ungazigcina njani iividiyo kwiTikTok? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 261
Iinethiwekhi zentlalo ziyindlela elula yokutsala abantu kwi-intanethi, yiyo loo nto yonke imihla kudalwa amaqonga edijithali afuna ukufumana abasebenzisi kwinethiwekhi. Injalo imeko ye I-TikTok, inethiwekhi entsha yenethiwekhi eyenze udushe phakathi kwabasebenzisi be-Intanethi. Kuba ibonelela ngeendlela zokuzonwabisa ezintle kwabo bayisebenzisayo.
Kananjalo, njengoko le ntanethi yenethiwekhi ingeyiyo kuphela indawo yokusebenzisa umxholo wee-audiovisual, kodwa ikwadala kwaye bonke abasebenzisi ababhalisiweyo banethuba lokuyisebenzisa ngokulinganayo. Uninzi lunokufuna ukuzigcina xa zisenza iividiyo zazo zokuqala ukuzikhumbula okanye ukuzithumela kwabanye abantu, kunye nokuzipapasha kwezinye iinethiwekhi. Ukuba awazi ukuba ungayenza njani, eli nqaku liza kucacisa.
TikTok Uyigcina njani ividiyo kwisicelo?
Ngethamsanqa, esi sicelo ngokwasemzimbeni sikuvumela ukuba ugcine iividiyo, kwaye kulula kakhulu ukwenza oku. Ukwenza oku, akukho mfuneko yokuba utyale ixesha elininzi kwaye kuphela Kuthatha imizuzu embalwa, ukulandela amanyathelo ambalwa kunye nokucofa isikrini, ukuze ukwazi ukonwabela umxholo ongaphakathi kwigalari kwaye wabelane ngayo nabo basondele kuwe.
Ukwenza oku, kufuneka kulandelwe la manyathelo alandelayo:
Okokuqala, Kuya kufuneka ugcine usetyenziso kwifowuni ephathekayo.
Sele uyifakile vula isicelo.
Emva koko, kuya kufuneka khangela ividiyo ofuna ukuyigcina.
Ke kufuneka ibekwe kwiscreen icon icon ibekwe ngasekunene.
Yaziwa njenge "ukwabelana".
Ngokucofa, ukhetho lukhona uya kubona "gcina ividiyo".
Oku kufuneka kucinezelwe, ngale nto, inkqubo iya kuqala kwaye emva kwemizuzwana embalwa ividiyo iya kugcinwa kwigalari yefowuni.
Gcina iividiyo zakho kwiTikTok
Kukhule kakhulu ekuthandeni iTikTok kangangokuba uninzi lwabasebenzisi luye lwasukela ekubeni ngababukeli luye lwafuna ukuba ngabadali bemixholo, kodwa njengesiqhelo, ukuba zizinto ezimanyelwayo ezabelwana ngazo kwinethiwekhi yoluntu, wonke umntu ngaxa lithile ufuna ukuthoba imixholo, Ukwabelana ngayo kwezinye iinethiwekhi zentlalo okanye ukuyigcina ngokulula kwaye ube nakho ukuyibona xa kufuneka njalo.
Ukukhuphela iividiyo zakho kwiTikTok, into ekufuneka uyenzile kukurekhoda, nje ukuba irekhodwe kwaye ihlelwe, kuya kufuneka uyilayishe kwinethiwekhi yoluntu, ucofe u "papasha". Ngale nto, ividiyo iya kugcinwa kokubini kwinethiwekhi yoluntu nakwigalari. Unenketho yokubeka njenge "vidiyo yabucala", ukwenzela ukuba kuphela umntu onokuyonwabela.
Yintoni omele uyazi ngeTikTok
Kuyimfuneko ukunciphisa, ukuba Ekuphela kwendlela yokufumana iividiyo ayikho ngeqongaNgenxa yokuthandwa kwale nethiwekhi, abantu abaninzi balayishe umxholo kwi-Instagram, Facebook okanye ezinye iinethiwekhi. Ke ngoko, xa ufuna ukugcina ividiyo eqala ukusuka kwiTikTok kodwa ikwenye inethiwekhi yoluntu.
Into eyimfuneko kukusebenzisa usetyenziso lwangaphandle, olufana nokukhuphela iwebhusayithi okanye ukhuphele usetyenziso. Kwimeko enje, kufuneka kuthathelwe ingqalelo oku Kuya kufuneka zikhutshelwe kwiivenkile zeapp, okanye zisetyenziswe ngokuthe ngqo kwiwebhu.
1 TikTok Uyigcina njani ividiyo kwisicelo?
1.1 Gcina iividiyo zakho kwiTikTok
2 Yintoni omele uyazi ngeTikTok
Ungazigcina njani iividiyo zeTikTok ngaphandle kokuzithumela?